संसद् बैठक बोलाउन छाडेर अध्यादेशको खेतीमा लागे प्रम खड्ग ओली ! – Dullu Khabar
संसद् बैठक बोलाउन छाडेर अध्यादेशको खेतीमा लागे प्रम खड्ग ओली !
३० मंसिर २०७७, मंगलवार १३:२२
काठमाडौं । सरकारले संसद बैठक छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएको छ । आगामी १६ दिनभित्र संसद बैठक बस्नुपर्ने भएपनि त्यसको केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर संसदलाई छल्ने सरकारको रणनीति रहेको पुष्टि भएको हो ।
तर, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त अध्यादेशबारे कुनै छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद बैठकमा म पनि सहभागी भएको हो, तर अध्यादेशबारे मलाई कुनै छलफल भएको जानकारीमा छैन । एकैचोटी राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको समाचार पढेपछि मलाइ पनि अचम्म लागेको छ’, ती मन्त्रीले रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने ।
यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो । यसैबीच सरकारले संवैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बेलुका बोलाएको परिषद् बैठककमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।